ओली र नेपालबीच भेटवार्ता, के बिषयमा के के भयो कुराकानी ? - सुनाखरी न्युज
ओली र नेपालबीच भेटवार्ता, के बिषयमा के के भयो कुराकानी ?
Posted on: July 7, 2021 - 8:18 pm
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । ओली र नेपालबीच बुधबार साँझ वार्ता सुरु भएको हो । नक्सालस्थित एक होटलमा दुई नेताबीच केहीबेरअघिदेखि छलफल सुरु भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा मोटामोटी सहमति भएपछि त्यसबारे थप छलफल र आपसी विश्वासका लागि ओली र नेपालबीच भेटवार्ता भएको ती नेताले जानकारी दिए ।
कार्यदलको बैठक बुधबार सकारात्मक भएको र एकरदुई दिनभित्र सबै टुंग्याउने तयारी भएको नेताहरुको दाबी छ । बैठकपछि कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले अदालतको फैसलापछि ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई पूर्ववत्ः अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एमालेमा गएका नेताहरुको व्यवस्थापन, प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा भाषा मिलाउने विषयमा करिब सहमति भएको बताए ।
एमालेले पार्टी विवाद समाधानका लागि जेठ २ मा १० सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा संस्थापन पक्षबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । नेपाल पक्षबाट भीम रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, विष्ट, घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्त छन् ।